2 Ụzọ Nyefee Music si iTunes ka HTC One | Music Nyefee
Nwere nnukwu iTunes Ọbá akwụkwọ na ugbu a ị na-azụ ihe HTC One (M8). Ị ga-chọrọ nyefee gị niile music si iTunes ka HTC One, otú i nwere ike na-enweta music ke laa. Ebe ọ bụ na iTunes na-arụ ọrụ maka iPhone, iPad na iPod, na-eme ka ya, ị ga-agwa enyemaka site na ụfọdụ-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Daalụ ịdị mma, e nwere na-na na ọtụtụ ndị bara uru-atọ ndị ọzọ ngwaọrụ dị, otu nke HTC mmekọrịta Manager na Wondershare TunesGo (Mac) kwụpụta. Ke ibuotikọ emi, m ga-egosi gị otú e si eji ngwá ọrụ abụọ nyefee music si iTunes ka HTC One. Ị nwere ike na-agụ ya ma họrọ nke ngwá ọrụ dị mma.
Part 1. Olee nyefee Music si iTunes ka HTC Otu na HTC mmekọrịta Manager
Part 2. Olee na-etinye iTunes Music on HTC Otu na Wondershare TunesGo
Part 3. Tụlee HTC mmekọrịta Manager na Wondershare TunesGo
HTC mmekọrịta Manager na-kere HTC Company, na-eji jikwaa HTC ekwentị site na kọmputa mfe. Ọ nwere ike mfe mbubata music si iTunes na Windows media Play, na mgbe ahụ mmekọrịta ka HTC One. Ebe a bụ zuru nduzi na otú ka mmekọrịta HTC Otu na iTunes iji nweta niile music.
Nzọụkwụ 1. Download HTC mmekọrịta Manager na PC gị na ma ọ bụ Mac dị ka gị na kọmputa os. Ebe a, m na-Mac version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 2. Run HTC mmekọrịta Manager na Mac. Jikọọ gị HTC Onye Mac site na iji eriri USB. Gị HTC onye ga-adịghị anya achọpụtara.
Nzọụkwụ 3. Site na ndabara, ọ na-akpaghị aka Mbubata niile music na iTunes ka HTC mmekọrịta Manager. Pịa Music taabụ. N'okpuru Nke a Computer ndekọ bụ listi ọkpụkpọ dị site na kọmputa. iTunes music na-echekwa na iTunes osise nchekwa ihuenyo.
Nzọụkwụ 4. Ọ bụrụ na iTunes music na-adịghị gosiri, ị nwere ike nne Mmetụta Ngosipụta na ekpe sidebar na akọrọ akpaghị aka mbubata si iTunes ka HTC mmekọrịta Manager.
Nzọụkwụ 5. Ke ekpe sidebar, pịa mmekọrịta> Akọrọ mmekọrịta họrọ listi ọkpụkpọ> iTunes osise nchekwa ihuenyo. Mgbe ahụ, aga n'aka ekpe ala akuku na pịa mmekọrịta.
Ọ bụ otú ahụ na-etinye music on HTC One si iTunes. Yiri mfe ma adaba, nri? Mgbe m na-eji ya, m na-ahụ na:
1. HTC mmekọrịta Manager adịghị mbubata niile music si iTunes dị ka ọ na-ekwu.
2. Ọ na-Mbubata songs, ọ bụghị listi ọkpụkpọ. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee listi ọkpụkpọ site na iTunes ka HTC One, m na-egosi na ị ga-agbalị ndị ọzọ ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Mac).
Part 2. Olee nyefee iTunes Music ka HTC Otu na Wondershare TunesGo
Dị ka HTC mmekọrịta Manager, Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Win) na-arụ ọrụ nke ọma na-ebufe iTunes music ka HTC One. Ọ na-eme ka mma. Nanị otu click, ọ nwere ike nyefee niile ma ọ bụ họrọ music na listi ọkpụkpọ site na iTunes ka Android, fim, iTunes U, pọdkastị-egosi na TV kpọfere kwa. E wezụga, ị nwere ike ịdọrọ na dobe ha ka ha HTC One. Tupu ebufe iTunes music, ị nwere ike ọcha ahụ iTunes Library site gwara music ID 3 na ihichapụ oyiri songs.
Ọ bụ dakọtara na HTC One, HTC Wildfire, HTC Ọchịchọ na ndị ọzọ na HTC ngwaọrụ na-agba ọsọ Android 2.1 na mgbe e mesịrị.
Mfe nzọụkwụ on otú nyefee iTunes Music ka HTC Otu na Wondershare TunesGo
Nzọụkwụ 1. Run Wondershare TunesGo on Mac ma ọ bụ PC-esi na gị HTC One ejikọrọ na eriri USB.
Nzọụkwụ 2.-emekarị, iTunes ga-agba ọsọ na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na, na-agba ya aka. Mgbe ahụ, software ga-egosi na nri nke iTunes.
Nzọụkwụ 3. Gaa na mmekọrịta taabụ. Ị nwere ike ma mmekọrịta dum iTunes n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ naanị mmekọrịta họrọ listi ọkpụkpọ. Họrọ otu na pịa mmekọrịta.
HTC mmekọrịta Manager
Nyefee niile iTunes Music ka HTC
Nyefee họrọ iTunes music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka HTC One
Idozi music ID 3 Ama
Hichapụ oyiri songs na iTunes
Mmekọrịta HTC music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes (Mac version eme)
Nkwado Samsung, LG, Motorola na ndị ọzọ Android ngwaọrụ
Dakọtara na Windows & Mac
Top 10 Android SMS Managers N'ihi Ị
Otú nyefee data si Blackberry ngwaọrụ ọzọ Blackberry
4 Ụzọ nyefee iCloud calender ka Android
Olee otú ka Wepụ Audio si AVI
> Resource> Nyefee> 2 Ụzọ Nyefee Music si iTunes ka HTC One